Antigua neBarbuda inzvimbo mbiri-yechitsuwa iri pakati pegungwa reCaribbean neGungwa reAtlantic. Iyo ine zvitsuwa zvikuru zviviri zvinogarwa, Antigua neBarbuda, uye chitsuwa chidiki chakati.
Hurumende: Federal monarchy, Paramende system
Capital: St. John
Kero yekufona: 268
Nzvimbo: 443 km²
Mari: Dhora reCaribbean
Mutauro unoshanda: Chirungu
Antigua neBarbuda inzvimbo yakazvimirira yeCommonwealth muEast Caribbean. Antigua yakatanga kuwanikwa naChristopher Columbus muna 1493 uye yakazova nzvimbo yekuBritain. Pasi paIshe Nelson, yakava musimboti wechikepe weBritain kubva kwayakatora iyo West Indies.
Antigua ndeye 108 sq mamaira kana 279.7 sq km, Barbuda iri makumi matanhatu neshanu mamaira kana 62 sq km. Antigua neBarbuda zvakasanganiswa ndeye 160.6 sq mamaira kana 170 sq km. Antigua nenzvimbo yayo yepadenga yakanga yakanyatsokodzera kuburitsa zvirimwa zvayo zvekutanga zvefodya, machira uye ginger. Iyo indasitiri mikuru, zvisinei, yakavandudza kuita kurima nzimbe izvo zvakatora makore anopfuura mazana maviri. Nhasi, neyakaina makumi matatu yekuzvimiririra kubva kuBritain, indasitiri yakakosha yeAntigua kushanya uye maindasitiri ebasa. Iwo anotevera makuru evashandirwi ndeyemari masevhisi masevhisi uye hurumende.
Antigua neBarbuda ndeye bumbiro remamongi rine Britain maitiro yeparamende maitiro ehurumende. Mambokadzi ane mumiriri wake, Gavhuna akasarudzwa, anomiririra Mambokadzi seMusoro weNyika. Hurumende inoumbwa nemakamuri maviri: nhengo gumi nenomwe dzakasarudzwa nhengo dzeVamiriri, dzakatungamirwa neMutungamiriri wenyika; uye nhengo 17 yedare reSenate. Nhengo gumi nembiri dzenhengo dzeSeneti dzinogadzwa naGavhuna General vachitungamirwa neMutungamiri, nhengo ina dzakagadzwa pasi pekutungamira kweMutungamiriri weVanopikisa uye maviri naGavhuna Mukuru. Sarudzo dzakajairika dzinopihwa makore mashanu ega ega uye dzinogona kudaidzwa kuti dzapfuura. Dare repamusoro uye Dare redzimhosva rakamirira Eastern Caribbean Dare Repamusoro uye Privy Council muLondon.
Iine mamwe mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu emhenderekedzo dzemvura yakachena yakajeka, zvitsuwa zvine hunyoro zveAntigua neBarbuda iparadhiso inokoka uye inoonekwa seimwe yenzvimbo dzakanakisa kwazvo pasirese. Nekuda kweizvozvo, kushanya ndiyo kiyi mutyairi weGDP uye inogadzira kwakatenderedza 365% yemari yechitsuwa, nemisika inokosha iri US, Canada neEurope.
Antigua neBarbuda vakasangana nenzvimbo yakaoma yehupfumi mumakore apfuura. Nekudaro, Hurumende yakapihwa basa nekuita kwayo chirongwa cheNational Economic and Social Shanduko Chirongwa uye chikwereti kugadzirisa basa. Imwe yemabasa ekutsigira hupfumi hwenyika yechitsuwa kuunzwa kweCustoms neInstitute Investment.
Kuzvipira kweAntigua naBarbuda kushandira indasitiri yekushanya uye kuwedzera GDP yavo kunoratidzwa nekupedzwa kwechirongwa chekuwedzera airport. Inokosha madhora zviuru makumi mana zvemadhora uye inosanganisira matatu emabhiza jet mabhiriji uye anopfuura gumi nemaviri ekutarisa-mune makadhi, kuumba iyo yakakwirira yepamusoro yekubudirira kwevanopinda. Izvo zvakare zvichabvumidza kuwedzera kune yakarongwa, charter uye inter-chitsuwa ndege. Kune dzimwe ndege dzakananga kuAntigua kubva kuLondon, New York, Miami neToronto munzvimbo.
Vagari vomuAntigua neBarbuda vanobatsirwa pasina mari inowanikwa mutero kana yemahara. Mari dzemitero dziri kufambira mberi kusvika makumi maviri neshanu muzana uye kune vasiri vagari, vari padanho repakati pe25%. Zvinokurudzirwa kuchinjiswa ku Chikamu 25 Chikamu che111 cheMubhadharo Wemitemo kuchachinja mutero pamari yepasi rose kune mutero pamari inotambirwa mukati meAntigua neBarbuda.
Mari iyi iEastern Caribbean dhora (EC $), iyo yakanamirwa kuUS $ pa2.70 EC $ / US $. Antigua naBarbuda inhengo yeUnited Nations (UN), yeBritish Commonwealth, Caricom uye Sangano reAmerican States (OAS), pakati pemamwe masangano mazhinji epasi rese. Vabati veiyo Antigua neBarbudan pasipoti vanonakidzwa nekufambisa kwemahara kuenda kunopfuura nyika zana nemakumi mashanu, kusanganisira United Kingdom nenyika dzenzvimbo yeSchengen. Vabati veiyi pasipoti, senyika dzese dzeCaribbean, vanoda vhiza yekupinda muUS sezvo vasiri nhengo yeVisa Waiver Chirongwa.
Hugari hweSaint Kitts naNevis
© 2021, Citizenity of Antigua uye Barbuda Inowanikwa ne Shopify